Dani Alves oo soo jeediyay inuu ku laabto Barcelona | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Dani Alves oo soo jeediyay inuu ku laabto Barcelona
Dani Alves oo soo jeediyay inuu ku laabto Barcelona
Posted by: Ahmed Haaddi October 16, 2021
Himilo – Daaficii hore ee Barcelona Dani Alves ayaa daaha ka qaaday inuu u furan yahay inuu ku laabto Camp Nou .
38 jirkaan ayaa ku guuleystay seddex horyaal oo Champions League ah, lix horyaal oo La Liga ah iyo afar Copa del Reys intii uu joogay Camp Nou, isagoo dhaliyay 21 gool halka uu sameeyay 101 kale 391 kulan oo uu u saftay kooxda.
Alves – oo ah ciyaaryahanka ugu qurxoon taariikhda kubbada cagta – ayaa dhawaan joojiyay heshiiskii uu kula jiray Sao Paulo kadib laba sano oo uu ku sugnaa dalkiisa, xiddiga reer Brazil ayaa diyaar u ah inuu ka jawaabo baaqa Barcelona.
Isagoo la hadlaya Sport, Alves wuxuu yiri: “Waxay u muuqan doontaa mid aad u fursad badan inaan dhaho Barca hadda waa ii baahan tahay, mar walba waxaan dhihi jiray waan baxay sababtoo ah waxaan arkay arrimuhu inaysan ahayn sidii aan u malaynayay inay ahayd.
“Marna ma doonaysid inaad aragto wax walba oo dhammaaday oo dhacaya tan iyo markii aan baxay. Waxaan idhi marka ay Barca ii baahato oo ay i rabto, waxaan ku jiri doonaa gacantooda iyadoo aan loo eegin meesha aan joogo.
“kalgacal, jaceylka iyo ixtiraamka aan u qabo kooxdan waa mid aad u badan, haddii Barca ay u maleyneyso inay aniga ii baahan tahay, waa inay i soo wacaan, weli waxaan u maleynayaa inaan wax ku biirin karo meel kasta, laakiin in ka badan Barca sababtoo ah tirada ciyaartoy da’ yar hadda ayay haystaan.
“Waxaan mar walba raadsadaa koox ii saamaxaysa inaan la tartamo kuwa waa weyn, u dagaalamo koobab iyo go’aan qaadasho meel kasta oo aan joogo, waxaan doonayaa inaan keeno guul, dagaal iyo maskax miyir leh meel kasta oo aan tago”.
Alves ayaa sideed sano la qaatay Barcelona ka hor inta uusan si xor ah ugu biirin Juventus sanadkii 2016, sidoo kale wuxuu labo sano ku qaatay buugaagta Paris Saint-Germain ka hor inta uusan u dhaqaaqin Sao Paulo.
Previous: 77 jir duuliye diyaaradeed ah oo adduunka ku wareega maalin kasta
Next: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 84aad
Maxaad ka xasuusataa ciyaartoy xirfadooda ku soo gabagabeeyay MLS
Toddobada garoon ee ugu daawashada badnaa ee laga diiwaan galiyay taariikhda kubbada cagta
Maxaad ka ogtahay sheekada Shan ciyaartoy oo dhaawacyo yaab leh ay kasoo gaareen u dabaaldagida gool